(DHEGAYSO) Xildhibaanada Puntland ee kasoo jeeda G/Sool oo ka digay cawaaqib xumada ka dhalandoonta duulaanka maamulka Hargeysa kusoo qaaday Tukaraq. – RadioQandala.com
(DHEGAYSO) Xildhibaanada Puntland ee kasoo jeeda G/Sool oo ka digay cawaaqib xumada ka dhalandoonta duulaanka maamulka Hargeysa kusoo qaaday Tukaraq.
Posted on 14 January, 2018 by RadioQandala
Xuseen Xaaji Yaasiin mp3
Xildhibaanada barlamaanka dowladda Puntand ee kasoo jeeda gobolka Sool, ayaa maanta digniin xoogan kasoo saray cawaaqib xumada ka dhalan karta duulaanka maamulka Hargeysa kusoo qaaday magaalada Tukaraq.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee barlamaanka Puntland, Xuseen Xaaji Yaasiin ayaa sheegay inuu Puntland kasoo dhamaaday dulqaadkii u lahaayeen maamulka Hargeysa, waxaa uu digniin xoogan ujeediyay cid walba oo uu Muuse Biixi u adeegsanayo in dhulkoodu beesha Isaaq xalaalaysato.
“Walaahi baan ku dhaartaye dhulkeena difaaciisa waan ku dhimanaynaa, waxaana loo soconaa oo aan ognahay in la tirtiro taariikhdeenii iyo magaceenii soo jireenka ahaa ee reer Sool, Wiil Hargeysa ka imid inuu maanta dhaho Garowe ayaan tagayaa oo xuduudaydii ah waa arrin ceeb ku ah reer Puntland oo idil,” ayuu yidhi xildhibaan Xaaji.
« DEG-DEG:- Wiil uu dhalay Feysal Cali Waraabe oo katirsan Daacish oo lagu dilay Buuraha iyo wararkii ugu dambeeyay..
FAYSAL C.WARAABE OO BEEN KA SHEEGAY SIDA UU WIILKIISA UGU BIIRAY DAACISH DHAGAYSO SHALAY IYO MAANTA »